भाद्र १२ गते, २०७३ आइतवार
28th August, 2016 Sun १२:३६:२६ मा प्रकाशित
प्रचण्ड, प्रचण्ड हुन् । प्रचण्ड, प्रचण्ड भइरहन्छन् । मानिसहरु कि प्रचण्डलाई गाली गरिरहेका भेटिन्छन् कि उनको प्रशंसा गरिरहेका । झण्डै १५ वर्षयता प्रचण्डै प्रचण्ड छन् । सबैको मुखमा प्रचण्ड छन् । बोलीमा छन् । लवजमा छन् । मायामा छन् । गालीमा छन् । यो आलेख संविधान जारी भएलगत्तै लेखिएको थियो । अहिले परिस्थिति अलिकति बदलिएको छ । ती प्रचण्ड सडकमा बसेर राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेका थिए, यी प्रचण्ड सिहंदरबारमा बसेर फेरिपनि नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । मानिसहरु भन्छन्, ‘प्रचण्ड बदलिइरहन्छन् ।’ मलाई सोध्न मन छ, ‘बदलिएका मानिसहरु हुन् कि प्रचण्ड ?’ उही मानिस अघिल्लो दिन वा साल प्रचण्डलाई गाली गरिरहेको देख्छु । उही मानिस पछिल्लो दिन या साल प्रचण्डको प्रशंसा गरिरहेको भेट्छु । म भ्रममा छु– बदलिइरहने मानिसहरु हुन कि प्रचण्ड ? कि दुवै ?
प्रचण्ड, आफैमा एउटा प्रवृत्ति हो । प्रचण्ड, पहलकदमी हो । प्रचण्ड, आन्दोलन हो । प्रचण्डमाथिका परिभाषा अनेकान छन् । कोही भन्छन्– उनी ‘अद्भूत’ हुन् । कोही भन्छन्– उनी ‘केही’ होइनन् । कोही उनलाई ‘बैद्य र बाबुराम जुधाएर खाइपाइ आएका चतुर’ भन्छन् । कोही भन्छन् ‘बाबुराम र बैद्यजस्तालाई सँगै लिएर हिँडेका अद्भूत ।’ प्रचण्ड बुझिनसक्नुका छन् ।
केही महिनाअघि प्रचण्डको नाम लिन डराउनुपथ्र्यो । कसैले चिया पसलमा माओवादीलाई गाली गरिरहँदा स्वयं माओवादी भएर पनि गाली थपिदिएर हिँडेमात्रै छुट पाइन्थ्यो । संविधान निर्माणपछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी एकाएक लोकप्रियताको शिखरमा छ । प्रचण्ड त्यो शिखरको टुप्पोमा मोहनी हाँसो हाँसिरहेका छन् । यो आजको सत्य हो । प्रचण्ड, आफैमा एउटा प्रवृत्ति हो । प्रचण्ड, पहलकदमी हो । प्रचण्ड, आन्दोलन हो । प्रचण्डमाथिका परिभाषा अनेकान छन् । कोही भन्छन्– उनी ‘अद्भूत’ हुन् । कोही भन्छन्– उनी ‘केही’ होइनन् । कोही उनलाई ‘बैद्य र बाबुराम जुधाएर खाइपाइ आएका चतुर’ भन्छन् । कोही भन्छन् ‘बाबुराम र बैद्यजस्तालाई सँगै लिएर हिँडेका अद्भूत ।’ प्रचण्ड बुझिनसक्नुका छन् । केही बुझ्नेहरुले भन्छन्, ‘स्वनिर्णय गरेको बेला प्रचण्ड हावी हुन्छन् । जब परिबन्धमा निर्णय गर्छन् तब प्रचण्ड फस्छन् ।’ प्रचण्डले ‘निराश’ माओवादी कार्यकर्तालाई भन्थे –माओवादी अब १० वर्ष राजनीतिको केन्द्रमा हुन्छ । हामीलाई भर लाग्दैनथ्यो । अरुलाई ‘इस ’ लाग्थ्यो । उनले त्यो सम्भव छ भन्ने कुरा फेरि एक पटक देखाएका छन् । प्र्रचण्डमाथि ‘बदलिइरहने’ ‘अस्थिर भइरहने’ आरोप लाग्छ । मेरो जबर्जस्त तर्क छ– उनी ‘स्थिर’ र ‘धिर’ नेता हुन् । संविधान निर्माणबारे प्रचण्डमाथि झिना आरोप छन् –उनले वर्ग छोडे । वर्गका मुद्दा छोडे । उनी कति ‘सतर्क’ छन् ? थाहा छैन । उनका तर्क छन् – गक्षअनुसार हाम्रो वर्गले अहिलेलाई पाउने यत्ति हो ।
आफ्नो पार्टी फुट्ने उनलाई थाहा थियो तर सेना समायोजन तथा शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याए । चुनावमा के हुन्छ ? थाहा थिएन । तर, अर्काको सरकार बनाएर देशलाई दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा होमे । र, राजनीतिकरुपमा गति दिए । उनी आफै पराजित भए । तर, डराएनन् ।
प्रचण्ड हारेर जित्न सक्छन् । संविधान निर्माणमा उनले जिते । उनी ‘जित्न र हार्न’ दुवैमा सिपालु छन् । यसबीच पार्टी फुटका चोटहरु बेहोरे । जब प्रचण्ड खुल्ला राजनीतिको मूलधारमा आए तब प्रचण्डका निर्णयहरुमा मुलुक हिँडेको छ । उनले उठान गरेका एजेण्डाहरुको निरन्तर बहस र कार्यान्वयनमा देश बहेको छ । हिजो संविधानसभाको चुनावयता देशका ठुला निर्णयहरुमा प्रचण्ड हावी छन् । सेना समायोजन, शान्तिप्रक्रिया, दोस्रो संविधानसभाको चुनाव र नयाँ संविधान निर्माणमा प्रचण्डको ‘बोल्ड’ निर्णयले काम गरेको छ । उनी प्रधानमन्त्री भएपश्चात संविधानको मुल धार भन्दा बाहिर रहेका मधेसी मोर्चा लगायतलाई सहमतिको बाटोमा हिडाइरहेका छन् । सायद त्यो चाडै निष्कर्षमा पुग्नेछ । आफ्नो पार्टी फुट्ने उनलाई थाहा थियो तर सेना समायोजन तथा शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याए । चुनावमा के हुन्छ ? थाहा थिएन । तर, अर्काको सरकार बनाएर देशलाई दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा होमे । र, राजनीतिकरुपमा गति दिए । उनी आफै पराजित भए । तर, डराएनन् । संविधान जारी हूँदा बखत आफ्नै पार्टी नेताहरु असहमत हुँदाहुँदै संविधान निर्माणको निर्णयमा पुगे । उनीमाथि पार्टीिभत्रकै मुख्य नेता र भारतीय पक्षको ठुलो दबाब थियो । तर, उनले टेरेनन् । प्रचण्ड के बोल्छन् ? होइन के गर्छन् ? भनेर हे¥यौं भने दृढ प्रचण्ड भेटिन्छन् । बरु सत्य के हो भने प्रचण्ड परिस्थितिको द्रुत गतिमा आँकलन गर्ने खुबी भएका नेता हुन् । उनी त्यो गतिमा हुँदा अरुले भेउसमेत पाउन्नन् अनि उनीमाथि ‘अस्थिरता’को आरोप लाग्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड जनताका दिनानुदिनका कामहरु सम्पादन गर्न व्यस्त छन् । ओलीले ठुलठुला गफ गरेर ९महिना विताए । प्रचण्डको बुझाईमा ससाना तर रणनीतिक महत्वका कामहरु सम्पादन गर्न उनका लागी ९ महिना काफी छ । उनले भनेजस्तै उनको पार्टीको ठेगान छैन, तर स्थानीय चुनाव गराए भने प्रचण्ड इतिहासमा त्यस्ता पात्र बन्नेछन्–जसले नयाँ संविधान लेख्न, जारी गर्न र कार्यान्वयन गर्न सम्भव बनाए । अँ त, सन्दर्भ प्रचण्डको चर्चाको भन्दा पनि चुनौतिको हो । प्रचण्ड अहिले हावी छन् । उनले संविधान निर्माणमा नसमेटिएका केही विषयबारेमा बोलिसकेका छन् । मधेसी, जनजाति, थारु, महिला र शासकीय स्वरुपबारे अबका एजेण्डा बनाउलान् नै । प्रचण्ड जति चर्चामा छन् उति नै उनीमाथि चुनौति पनि छन् । ती चुनौतिहरुलाई प्रचण्डले कसरी नेतृत्व गर्छन् भन्ने कुराले प्रचण्डको लोकप्रियताको शिखरको नापोजाँचो गर्नेछ ।
खासमा नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले पनि नाम मात्रै हो । आज यो पार्टी पार्टीको रुपमा छैन । पेरिसडाँडामा ‘साइनबोर्ड’ र निर्वाचन आयोगमा ‘दर्ता’बाहेक अरु एमाओवादीको नाममा केही छ भन्नु आत्मरति मात्रै हो । यस्तो नाम मात्रै भएको माओवादीलाई पुनर्निर्माण गर्न सक्छन् या सक्दैनन् ? उनको पार्टी छाता जस्तो छ । को कुन संगठनको हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन । कसको के हैसियत भन्ने पनि छैन । हिजो फुटेका १० पार्टी एकिकरण गरेर प्रचण्डले मनोवैज्ञानिकरुपमा जुन विजय हासिल गरे त्यो संगठनमा बदलिएन भने त्यसको केही अर्थ छैन । सायद प्रचण्डले यो बुझेको हुनुपर्छ । प्रचण्डमाथि आजको युगसापेक्ष कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने चुनौति छ ।
२. वर्गीय मुद्दा
जुन जुन एजेण्डा बोकेर एमाओवादीले जनयुद्ध या संविधानसभा लड्यो, ती सबै एजेण्डा नयाँ संविधानमा सम्बोधन भएका छैनन् । सोही कारण अहिले प्रचण्डमाथि वर्गीय मुद्दा छाडेको आरोप छ । प्रचण्ड यसैमा रमाएर बस्छन् या सम्बोधन हुन बाँकी वर्गीय मुद्दा उठाएर थप उपलब्धिका लागि योजनाबद्ध लड्छन् । यो प्रचण्डको अर्को चुनौति हो । थप वर्गीय मुद्दा उठाउँदा मध्यम वर्गले उनका मुद्दा स्विकार्छ कि स्विकार्दैन ? वा भनौँ स्विकार्न प्रचण्डले के त्यस्तो योजना ल्याउँछन् ? लोकतान्त्रिक राजनीतिमा आएको माओवादीलाई कुनै एउटा वर्गलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने छुट छैन । वर्गीय पक्षधरता पनि लिने र अर्को वर्गलाई पनि सँगै लिएर जाने बाटो त्यति सहज छैन ।
३. प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
केपी ओलीको ‘राष्ट्रवाद’ को ह्यांगओभरले प्रचण्डलाई सताइरहने छ । खासमा केही नगरेका तर ९ महिनामा ८० लाख बराबरको खाजा खाँदै राष्ट्रवादको गफ छाँटेका ओली आजपनि राष्ट्रवादी र प्रचण्ड अराष्ट्रवादी भन्नेहरुको कमी छैन । प्रचण्डलाई राष्ट्रहित प्रतिकुल जस्तो देखिने कुनै गल्ती गर्ने छुट छैन । प्रचण्ड र ओलीले नाकाबन्दीकाबेला सँगै लडेको छिमेकी भारत अझै उस्तै छ । उसको दबाव थेग्न हिजो ओलीलाई जसरी प्रचण्डले टेको लगाइदिएका थिए त्यो टेको उनको राजनीतिक सहयात्रि कांग्रेस वा देउवाले लगाउने छैनन् । यस्तोमा उनी ‘खतरनाक छिमेकी’सँग जोगिने चुनौति सामान्य छैन । मधेसी मोर्चा वा संविधान नमानिरहेको पक्षलाई मुलधारमा ल्याउन उनले संविधान संशोधनको पहाड उठाउन पर्नेछ । त्यो पहाड घाइते बाघ झै सिहंदरबारबाट बाहिरिएको एमालेको हैंसे बिना सम्भव छैन । उनले एमालेलाई सम्झाएर सुख छैन । उ सँग लड्नु छ । यसो नभए संविधान कार्यान्वयन हुँदैन र पहिलो संविधानसभा विघठनको अपजस जस्तै नयाँ संविधान लागु नगरेको आरोप उनको टाउकोमा आउनेछ । संविधान कार्यान्वयनका लागी अर्को चुनौति स्थानीय निकायको चुनाव हो । समयअवधि, कैंयन कानुनहरु नबनेको स्थिति र निर्बाचन आयोगमा प्रतिकुल रबैया उनका लागी बाटोका काडेतारहरु हुन् । तिनलाई प्रचण्डले पन्छाउने चुनौति छ । यि काम सहज छैनन् र राष्ट्रिय सहमतिबिना सम्भव छैन । तसर्थ दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन सक्नु या नसक्नुले उनको सफलता निर्भर गर्दछ ।
४. होइन तर हो
यो मुख्य चुनौति ‘होइन’ तर ‘हो’ । उनका पारिवारिक, जीवनशैलि र कार्यशैली देखाएर विरोधीहरुले जहिल्यै खुइल्याउने गर्छन् । सत्य के हो ? पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई थाहा भए पनि आम मानिसलाई थाहा हुन्छ भन्ने हुँदैन । राजनीतिमा देखिने कुरा र नदेखिने कुरा दुवैले कहिलेकाहीँ समान अर्थ र महत्व बोकेका हुन्छन् । यहाँ यसोउसो भनिरहनुभन्दा पनि माथिका कुराहरुमा प्रश्न उठ्न दिनुहुँदैन । प्रचण्ड प्रायः एक्लै दौडिरहेका हुन्छन् । ‘एक्लै’ दौडने तरीकालाई बदलेर ‘टिमबद्ध’ दौडने बनाउन जरुरी छ । उनको राजनीतिक दैनिकी यति भद्रगोल छ कि त्यसले इमान्दार मानिसहरुलाई वाक्क बनाउँछ । यसलाई उनले निर्ममतापूर्वक बदल्नुपर्छ ।
५.यता छ झन ठुलो चुनौति
प्रचण्ड सफल हुने हो भने प्रचण्डसँग मुलभुत रुपमा यी तीन संयन्त्र साथै हुनु जरुरी छ । उनले उनका योजनाअनुसार काम गरिदिने कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीहरुको सेट तयार गर्न जरुरी छ । जो माओवादी या उनीसँग छैन । कर्मचारी संयन्त्रको हातमा कुनै राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल या असफल बनाईदिने तागत राख्दछ । ति माओवादी नहुन सक्छन् तर कर्तव्यनिष्ट होउन् । प्रचार संयन्त्रमार्फत उनले गरेका कामहरुलाई सकारात्मक रुपमा जनतासम्म पर्याउन अनिवार्य जस्तै छ । माओवादी या प्रचण्डका समर्थकहरु नेपालका मुलधारका मिडियाहरुमा छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । यो उनको अर्को चुनौति हो । तर ति स्थानहरुमा राम्रोलाई राम्रो भन्ने संचारकर्मीहरु पनि छन् तिनको परिचालनमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । यसैगरी पार्टी सरकारमा गएपछि केहीले सत्ताभोग गर्न पाउने र ठुलो पार्टीपक्ति असन्तुष्ट बनेर सरकारलाई असहयोग गर्ने प्रवृति पार्टीहरुमा छ । त्यो माओवादीमा पनि छ । समग्र पार्टी पंक्तिलाई सरकारका कामहरु र जनताको कामको बिचमा पुलको काम दिनु जरुरी छ । यो बुँदामा भनिएका चुनौतिहरुको बिचमा यसअघिका प्रधानमन्त्री ओली थिएनन् । कर्मचारी संयन्त्रमा उनको पकड रहेको कुरा चुनावले देखाउँछ । अपवादमा छोडेर प्रत्येक मुलधारका मिडियाहरुमा उनका कार्यकर्ताजस्तै पत्रकार रहेछन् भन्ने कुरा उनको सिहंदरबाट बहिगर्मनको बेलामा प्रष्टै देखियो । तिनले ओलीका लागी समाचारका कोणहरु कसरी सकारात्मक बनाउँथे भनेर थप भनिरहन परेन । उनीहरु नै अहिले प्रचण्डकाबारेमा समाचारहरु कसरी नकारात्मक बनाउने भनेर लागि नै रहनेछन् । ओलीले पार्टीपंक्तिबाट सयौं कार्यकर्ता सरकारमा भर्ती गरे । ९ महिनामा ८० लाखको खाजा पक्कै ओली एक्लैले खाएनन् । यसरी उनले पार्टीपंक्ति र कार्यकर्तापक्तिलाई खुशी राखे र आफ्नो जयजयकारमा माइतिघरमा जुलुश निकाले । यी सबै सुविधाबाट प्रचण्ड बन्चित छन् । यो प्रचण्डको सामान्य चुनौति होइन ।
प्रचण्ड ‘सीमा र कमजोरीरहित’ हुन् भन्न थालियो भने अतिरञ्जना हुन्छ । प्रचण्ड माथि उल्लेखित चर्चाका अतिरिक्त एक मान्छे हुन् । नेपाली समाज र संस्कार विकासको सापेक्षतामा कमजोरी हुन्छन् । यो नै सत्य हो । तर प्रचण्ड हारेर ‘जित्न’ सक्छन् । जितेर ‘हार्न’ सक्छन् । हार्दा र जित्दा पनि सहन सक्छन् । लोकप्रियताको शिखरमा उभिएका प्रचण्डले माथि उल्लेखित चुनौतिलाई सामना गरे भने भुइँबाट आएको नेपालीको छोरो ‘जननेता’ र ‘राजनेता’को दुवै पगरी गुथ्न सक्छन् ।